I-Beachhouse ene-terrace emangalisayo ecaleni kolwandle
Ngemizuzu emi-5 ukusuka kukuphithizela kwemihla ngemihla useBocaCangrejo efihlwe ngasemva kwentaba. Ilali encinci ethandekayo yokuloba apho wonke umntu sazana kwaye apho ukhenketho oluninzi lungekho. Indlu inendawo eyodwa esecaleni kolwandle enethafa elinophahla olumangalisayo apho unokutshisa khona ilanga kwaye wonwabele umbono wepanoramic phezu koLwandlekazi lweAtlantiki. Usenokubona iminenga kunye nee dolphin ukusuka apha ukuba unethamsanqa.
Ungena endlwini kwikhitshi elihle / kwigumbi lokuhlala. Eli gumbi lineefestile ezimbini ezinkulu ezityibilikayo eziphantse zibe yi-3 yeemitha. Ukusuka apha unembonakalo entle yolwandle njengakwithafa eluphahleni, oku kukunika imvakalelo yokuba ungaphandle ngelixa ungaphakathi. Ikhitshi libanzi kakhulu kwaye lixhotyiswe kakuhle ngazo zonke izinto eziluncedo zale mihla.
Ulahla umatshini wokuhlamba izitya, i-oven, i-ceramic hob enezitshisi ezi-4, i-microwave kunye nesikhenkcisi esikhulu sefriji. Unokufikelela kumatshini wekofu weDolceGusto kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngepepile, ityuwa, ioyile, iviniga kunye neziqholo. Kwakhona, kukho iimbiza, iipani, izitya, izinto zokucheba nayo yonke into oyifunayo. I-salon ifakwe itafile yokutya engqukuva enezitulo ezi-4, ibhedi yesofa yabantu aba-2 kunye ne-smart TV. Ipropathi inoqhagamshelo lwe-intanethi ngefibreoptic ukuze ube noqhagamshelo olukhawulezayo. Igumbi lokuhlala linendlu yangasese eyahlukileyo apho unokufumana khona umatshini wokuhlamba (9 kg). Ipropati yenzelwe isicwangciso esivulekileyo esithetha ukuba akukho zicango phakathi kwamagumbi ahlukeneyo (ngaphandle kwamagumbi okuhlambela).
Ukuhla ngezinyuko ufika kwigumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela leen-suite elineshawa, indlu yangasese kunye nesinki ephindwe kabini. Ngaphaya koko uya kufumana ibhedi ebanzi ephindwe kabini kunye nesakhiwo kwi-wardrobe.
Kumgangatho ongasentla kukho i-terrace ebanzi kakhulu enekhitshi langaphandle elinesinki, itafile enkulu yokutyela enezitulo kunye nendawo yokuhlala ecaleni kwefestile.
I-bedlinen, imithwalo, iitawuli, iitawuli zaselwandle, i-dishcloths, iphakheji eyamkelekileyo njl.
40" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Imizuzu nje eli-10 ukusuka eSanta Cruz ilali yokuloba enomtsalane eBoca Canngrejo inokufunyanwa ibekwe kwinduli entle. Ngenxa yendawo ekhuselweyo kunye nemozulu yayo encinci ungonwabela imozulu entle unyaka wonke. Yenzelwe abo bafuna ukhenketho olukhethekileyo nokuba kude kukhenketho oluninzi. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhamba, ukuntywila okanye ukuhamba ngephenyane. Ngaphaya koko ngenxa yendawo yayo entle, yindawo egqibeleleyo yokufumana isiqithi saseTenerife. Eyona nto ibalulekileyo ukukhankanywa kukuba iBoca Canngrejo yindawo entle kakhulu yokuya kubathandi be-scuba diving kunye nezikolo ezininzi zokuntywila ngemizuzu eyi-10 kuphela kunye neparadesi epheleleyo yokufumanisa ulwandle. Ngamanye amaxesha unokubona amahlengesi kunye neminenga idada elwandle.
Ndingumamkeli zindwendwe ngentliziyo yam yonke kwaye ndiya kwenza konke ukukunika iholide yamaphupha egqibeleleyo. Kwimeko yokuba ndifumaneke ukunikezela ngezitshixo ndinesefu encinci enephinikhodi ukuze uhlale ungena eNdlini, ikwaluncedo kakhulu ukugcina izitshixo ukuba uyaqubha okanye usiya elunxwemeni.
Ndingumamkeli zindwendwe ngentliziyo yam yonke kwaye ndiya kwenza konke ukukunika iholide yamaphupha egqibeleleyo. Kwimeko yokuba ndifumaneke ukunikezela ngezitshixo ndinesefu enci…